शिक्षा Archives - Page 12 of 15 - Dna Nepal
पोखरा विश्वविद्यालयको घटना छानवीन गर्न नेविसंघको माग ११ भाद्र २०७५, सोमबार ०३:३२
पोखरा, भदौ ११ । पोखरा विश्वविद्यालयमा केहीदिन अघि भएको घटनाबारे गम्भीर भएर छानवीन गर्न नेविसंघले माग गरेको छ । विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको कम्प्युटर सोही विश्वविद्यालयका कर्मचारी र पूर्व विद्यार्थी मिलेर ह्याक गरेका..
पोखराका सार्वजनिक विद्यालय सोमबार बन्द हुने १० भाद्र २०७५, आईतवार १२:५८
पोखरा, भदौ १० । पोखराका सार्वजनिक विद्यालयहरु सोमबार बन्द हुने भएका छन् । गाईजात्राको अवसरमा नेवाः खल कास्कीले विद्यालय बन्द गरिदिन आग्रह गरेपछि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको सिफारिसमा पोखरा महानगरले विद्यालयमा पत्र पठाएको हो । अरु..
नाटकीय शैलिमा पोखरा विश्वबिद्यालयको कम्प्युटर ह्याक, प्रहरीको गम्भीर अनुसन्धान ८ भाद्र २०७५, शुक्रबार १५:१६
पोखरा, भदौ ८ । पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्प्युटर ह्याक भएको छ । रात परेपछि फर्निचर नाप्ने भन्दै गएको टोलिले हजारौं विद्यार्थीको डाटा रहेको कम्प्युटर नै ह्याक गरेको हो । ७ बजेतिर ३ जना ब्यक्ति कार्यालयभित्र पसेर..
सांसद नै अध्यक्ष भएको स्कूल झन् भद्रगोल, हिसाव खोज्दै विद्यार्थीको विरोध ३१ श्रावण २०७५, बिहीबार ०५:२७
पोखरा, साउन ३१ । जनयुद्धका घाईते, शहीद र बेपत्ताका छोराछोरीलाई पढाउनका लागि १० बर्षअघि पोखरा १४ मझेरी पाटनमा एउटा स्कुल खुल्यो । २०६६ सालमा खुलेको शहीद स्मृति आवासिय विद्यालयमा जनयुद्धबाट पीडित भएका छोराछोरी मात्रै पढ्छन् । तत्कालीन नेकपा..
पोखरा विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई विद्यार्थीले दिनभर कोठाभित्रै थुने २८ श्रावण २०७५, सोमबार १४:२७
सन्दिप पौडेल पोखरा, साउन २८ । पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयका कर्मचारीलाई विद्यार्थीले सोमवार दिनभर कार्यालय भित्रै थुनेका छन् । व्यवस्थापन संकायमा धेरै विद्यार्थी फेल भएको र त्यसको पुनः नतिजा प्रकाशन गर्न माग गर्दै..
गोरखा नगरपालिका बिरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा
गोरखा, साउन २९ । गोरखा नगरपालिकाले जारी गरेको नगर शिक्षा ऐन २०७५ को बिरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया र नियमावलीलाई लिएर समितिका केही पदाधिकारीहरुले मुद्दा हालेका हुन् । ‘केन्द्रीय र प्रदेश..
अनुमतिविना चलेको भन्दै लेखनाथको शिलशिला बोर्डिङ नचलाउन अन्तरिम आदेश २३ श्रावण २०७५, बुधबार ०१:३२
पोखरा, साउन २३ । पोखरा महानगरपािलका ३१ बेगनासस्थित शिलशिला बोर्डिङ स्कुलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । शिलशिला स्कुलले अनमति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको कुनैपनि संस्थागत विद्यालय नभएको भन्दै सोमबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।..
प्रधानन्यायधिशको प्रमाणपत्र विवाद–मिश्रको प्रमाणपत्र पनि भारतकै ! २१ श्रावण २०७५, सोमबार ०३:५३
काठमाण्डौं, साउन २१ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद तात्तातै रहेको बेला उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको प्रमाणपत्र पनि ‘अर्गा्निक’ नभई आयातीत देखिएको छ । यद्यपि जोशीको नाम संसदीय..
पाेखराकाे तालबाराही स्कुल–४० बर्षमा ५ रोपनी जग्गा गायव ! १९ श्रावण २०७५, शनिबार ०३:४१
प्रकाश ढकाल पोखरा, साउन १९ । पोखराका अधिकांश विद्यालयहरु सार्वजनिक सम्पत्तिकै भरमा चलेका छन् । कुनै स्कुलहरु गुफाको आम्दानीमा छन् भने कुनै बिद्यालयले सार्वजनिक जग्गामै सटर बनाएर बेचेका छन् । केहीलाई चाहीँ सरकारले नै जग्गा दिएर लालपुर्जा..
प्रदेश ४ ले महाविद्यालय चलाउने, छलफल सुरु १७ असार २०७५, आईतवार ०२:५०
पोखरा, असार १७ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश ४ ले पनि प्रदेशभित्र महाविद्यालय स्थापना गर्नका लागि छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा खर्च हुनेगरी प्राविधिक महाविद्यालयको सम्भाब्यता अध्ययन शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ बजेट..